medical knowledge – စာမကျြနှာ3– Healthy Life Journal
All posts tagged "medical knowledge"
ဆီးသွားတဲ့အခါ မသက်မသာ ခံစားနေရသလား
———၊ ဇွန် ၊——— သင့်အနေနဲ့ ဆီးသွားတဲ့အခါ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ မသက်မသာဝေဒနာတွေကို ခံစားနေရတာက ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ မျိုးပွားအင်္ဂါတ၀ိုက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းကျောက်တည်ခြင်း စတဲ့ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆီးသွားတဲ့အခါ မသက်မသာဖြစ်စေတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းကြောင့်ပါ။ ခံစားရတတ်သော လက္ခဏာများ •...
အချိန်နှစ်စက္ကန့်ကြာတိုင်း အသက် ၃၀ နဲ့ ၇၀ ကြား လူတစ်ဦးဟာ အောက်ပါအခြေအနေတွေနဲ့ အရွယ်မတိုင်ခင် သေဆုံးနေကြပါတယ်။ နှလုံးရောဂါနဲ့ အဆုတ်ရောဂါများ လေဖြတ်ခြင်း ကင်ဆာရောဂါ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ စတာတွေနဲ့ အရွယ်မတိုင်ခင် သေဆုံးနေကြပါတယ်။ Ref:WHO
ကိုယ့်အိမ်သားတစ်ဦးဦး ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်မှာ အသည်းရောင်အသားဝါစီပိုးရှိပြီဆိုရင် ကိုယ်အပါအ၀င် အိမ်သူအိမ်သားတွေမှာ မကူးစက်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင်သင့်သလဲဆိုတာသိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ စီပိုးအတွက် ကာကွယ်ဆေးမရှိပါ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုးကသာ ကာကွယ်ဆေးရှိပြီး စီပိုးက ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါ။ စီပိုးကူးစက်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများ (၁) စီပိုးရှိ/ မရှိ သွေးမစစ်ဘဲ...
ခူနာ ခေါ်သော ပြည်တည်နာ (Abscess)
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— Q. ဆရာခင်ဗျာ ကျနော့်အမျိုးသမီးမှာ ခူနာရောဂါကို ခံစားနေရပါတယ်။ ဟိုအရင် သူငယ်စဉ်အချိန်မှာလဲ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျနော်သိချင်တာက အဲဒီရောဂါက ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဖြစ်စေလဲဆိုတာရယ်၊ ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာရယ်၊ ဘယ်လိုကုသပျောက်ကင်းနိုင်သလဲဆိုတာလေး ပြောပြပေးပါ။ နောက်ထပ် အဒီရောဂါကို အမြစ်ပြတ်အောင်...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဆယ်ကျော်သက်အများစုဟာ လူလုပ်ဟော်မုန်းလို့ တင်စားကြတဲ့ စတီးရွိုက်တွေကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ စတီးရွိုက်ဆေးတွေဟာ ကြွက်သားဖြစ်စဉ်ယိုယွင်းမှုကို ဟန့်တားပေးတာကြောင့် လူငယ်တွေ၊ အထူးသဖြင့် အားကစားသမားတွေ သုံးချင်ကြပါတယ်။ စတီးရွိုက်ဆေးရဲ့  ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးကို မသိလို့ သုံးလေ့ရှိကြတာပါ။...
ဆီးချိုသမား ကျန်းမာရေးနဲ့အညီ မတည့်စာစားကြမယ် . . .
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ဆီးချိုသမားတွေက မတည့်တဲ့အစာတွေကို စားချင်ကြတယ်။ ဥပမာ-အသီးတွေမှာ ချိုတဲ့အသီးတွေကို စားချင်တဲ့အခါ ဘယ်လိုပုံစံမျိုး စားလို့ရပါသလဲ ဆရာ။ A. အသီးတွေကို နှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်။ ချဉ်တဲ့အသီးရှိတယ်၊ ချိုတဲ့အသီးရှိတယ်၊...
ဘယ်လိုအတိုင်းအတာဆိုရင် သွေးတိုးရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါသလဲ . . .
—–၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. သွေးပေါင်က ဆေးခန်းမှာတိုင်းတာနဲ့ အိမ်မှာတိုင်းတာ အပြောင်းအလဲရှိတော့ ဘယ်လိုအတိုင်းအတာဆိုရင် သွေးတိုးရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါသလဲဆရာ။ A. သွေးတိုးတယ်ဆိုတာ သွေးပေါင်က ၁၄၀/ ၉၀ mmHg နဲ့ အထက်ရှိရင်...
———၊ ကိုထက် ၊——— ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက အမျိုးသားအများစုဟာ သုက်ကောင်အရေအတွက် လျော့နည်းနေကြကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သုက်ကောင်အရေအတွက် ထုတ်လုပ်မှု အားကောင်းစေဖို့ရာ လိုက်နာသင့်တဲ့ နည်းတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အဆင့် (၁) ဆေးလိပ်နှင့်အရက် ရှောင်ပါ ဆေးလိပ်နဲ့အရက်ဟာ သုက်ကောင်အရေအတွက်ကို ထိခိုက်စေရုံသာမက...